အခမဲ့သင်ျဂိမ်း:ဂိမ်းကစားညမ်း Xxx စီမံကိန္း
အတူဒါကြောင့်အများအပြားအလွန်ကြီးစွာသောဂိမ်းများအင်တာနက်ပေါ်မှာအများအတွက်အပင်အမျိုးအစား၊ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုစဉ်းစားအဘယ်ကြောင့်ရှိပါတယ်အနည်းငယ်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ညမ်းသဘောတရား။ ရှက်စရာကောင်းတယ်၊ဒါပေမယ့်အခမဲ့သင်ျဂိမ်းများ၊ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ပြောင်းလဲဖို့အဆင့်အတန်းပိုနေမြဲကျားနေသို့အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကျနော်တို့အဝေးမှာပိုပြီးစိတ်ဝင်စားတယ်။ မြင်မှစတင်ခြင်းသည်အဘယ်အရာကိုကျွန်တော်လုပ်နေခဲ့တာပေါ့၊နံပါတ်တစ်အအာရုံစူးစိုက်ကျွန်ုပ်တို့၏စီမံကိန်းကိုအားလုံးအကြောင်းမိသားစုဖော်ရွေဖျော်ဖြေရေးနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု။, သင်ခံစားရရန်အဘို့အထွက်ရှိပါတယ်ရိုးရိုးမရ punters တံခါးဝ၌၊ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ပြီးနောက်၊သင်လေ့လာသင်ယူအကြောင်းကိုအနည်းငယ်အခမဲ့သင်ျဂိမ်း၊သင်သိလာပါလိမ့်မယ်။ကိုယ်အဘို့ဤကယ့်ကိုအပူဆုံးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်ရှိအပေါက်မှထွက်ရှိသောသင်တက်လက်မှတ်ထိုးအဖြစ်လျင်မြန်စွာတတ်နိုင်သမျှရရန်သင်၏လက်ချောင်းအပေါ်အဘယ်အကျွန်ုပ်တို့သည်ပူဇော်ဖို့ရှိသည်။ ကျနော်တို့အပြည့်အဝတာဝန်ယူသင်တို့အဘို့အစွဲဒီနေရာမှာ–ကိုယ့်ကြောင်းသိလျှင်သင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးချစ်သောသူနှစ်ဦးစလုံးဗီဒီယိုဂိမ်းများနှင့်သင်ျ၊သင်သွားဖို့ရှိခြင်းတက်အဆုံးသတ်အတော်လေးကြိုက်မှပူးတွဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာဘေ့စ။, အဆင်ပြေမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှုထောင့်–ဒါပေမယ့်ကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ကိုယ့်ကိုယ်ကို၊စိတျနှလုံး၏ကြက်ဒုက္ခသို့အတွက်နည်းလမ်းတွေအကြောင်းစဉ်းစားဘယ်တော့မှမတတ်နိုင်သမျှအမီ! အခုအဲဒီမွာဘာခမဲ့သင်ျဂိမ်းများကိုဆက်ကပ်ရန်ရှိပြီးလျှင်သင်ဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်သင်တို့အဘို့အပြီးတာနဲ့ပြုသောအမှုဖွင့်။
ထိုအချိန်ကအရေးအသား၏ဤ၊ကျနော်တို့ ၄၇ ဂိမ်းအတွင်းအခမဲ့သင်ျဂိမ်းများ–ဒါဟာတော်တော်လေးအပြစ်တင်ဖွယ်ကောင်း၊မှန်သော? သေချာ၊ငါတို့သည်သင်တို့အမဖြစ်စေခြင်းငှါကဲ့သို့ကောင်းသောရေနွေးငွေ့၊အကြှနျုပျမူကားသင်ပြောပြပါရစေ:ကျနော်တို့ ၄၇ ပိုပြီးဂိမ်းများထက်သူတို့ပတ်ပတ်လည်အခြေပူသင်ျသံုးေ! ငါထင်သည်ဟုဆိုဖို့ဘေးကင်းလုံခြုံမယ့်အနာဂတ်ကားဂိမ်းကစားအွန်လိုင်းရှာဖွေနေသည်တော်တော်လေးအပြစ်တင်ဖွယ်ချိုမြိန်ဆိုရင်နိုင်မှရှာတွေ့အနည်းငယ်တစ်ဒါဇင်မိသားစု-အာစုတ် simulators ဆော့ကစားနိုင်ပါတယ်တစ်ပြားပေးဆောင်ခြင်းမရှိဘဲ–ဘယ်လောက်ဖွင့်ကျနော်တို့အမှုအရာဒီမှာအခမဲ့သင်ျဂိမ်း!, အိုး၊ငါလုပ်ချင်ကြောင်းအလေးအနက်ငါတို့သည်အတူသာသဘောတူညီသီးသန့်အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ဖန်တီးနှင့်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ။ ဆိုလိုတာကဘာမှမသင်မြင်တဲ့အထဲမှာဒီနေရာကနေအပြင်ဘက်စီမံကိန်း–အဓိပ္ပာယ်ဖူးစားခေါင်းစဉ်မီ–ထိုမှတပါး၊အဘယ်အရာမှပြင်ပမှဆည်းပူးခဲ့သည်တွင်း၊ဒါကြောင့်ဂိမ်းပါလိမ့်မယ်ကစားမည်ဖြစ်လုံးဝလတ်ဆတ်သော။ လူတွေကအများကြီးဘို့ဤအမျိုးအစားသည္ပြည့်စုံသော၊မသိသူတို့အနေသို့ကြွလာအခမဲ့သင်ျဂိမ်းများနှင့်အရာတစ်ခုခုရဖို့အမှန်တကယ်မူထူးခြားတဲ့နှင့်အသစ်။, ကျနော်တို့နှင့်အတူစိတ်ပျက်တွေရဲ့တည်ဆောက်မှုစီမံကိန်းများအတွက်အတိတ်အကြောင်းတွေကိုမကယ်မလွှတ်တဲ့ကောင်းသောဂိမ်းကစားအတွေ့အကြုံနှင့်ဟုတ်တယ်၊ကိုယ့်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်ဖို့လှည့်ဒီအယူအဆအပေါ်၎င်း၏ဦးခေါင်းမှာကြားထားနောက်ကျတာထက်။ အဆင်သင့်အမြင်ကိုယ်အဘို့အဘယ်သို့အခမဲ့သင်ျဂိမ်းအားလုံးအကြောင်းပါ? မွာပိုပြီးအခြားအကျိုးခံစားခွင့်များဤစီမံကိန်း!
မှန်–မသာသင်အနိုင်ကစားရန်ဂိမ်းရှိသည်ပေးဆောင်ခြင်းမရှိဘဲသူတို့အဘို့၊သို့သော်ထိုသို့ထွက်လှည့်ကြောင်းကျွန်တော်တို့လည်းသေချာကြောင်းတစ်ခုလုံးကိုဂိမ်းကက်နိုင်ခံစားမပါဘဲသင်လိုအပ်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ဖို့ဘာမှမပြည်တွင်းမှသင်၏ကွန်ပျူတာ! ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်လွန်ပြင်းထန်စွာအတွက်ညစ်ညမ်းဂိမ္းအနာဂတ်အဘယ်မှာရှိသင်ရှိသည်ရန်မလိုအပ်ပါဘူးမည်သည့်ဒေသခံဖိုင်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေသလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိတ်အပိုင်းအားဖြင့်အောင်အခမဲ့သင်ျဂိမ်းများတစ်ဦးလုံးဝ-အခြေခံ။ ဒီဖင့္အသုံးျပဳရေအတွက်၏အားသာချက်၊ဒါပေမယ့်ငါတို့အဘို့အအကြီးမားဆုံးသူတယောက်အကြောင်းရိုးရှင်းသောတကယ်တော့မည်သူမဆိုလာတြင္ေရအရေးယူ။, အ MacOS ဂိမ်းကစားကြိုဆိုထက်ပိုပါတယ်၊အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိုဘိုင်းဆွေ–ကိုယ့်ဤမျှကာလပတ်လုံးအဖြစ်သင်ရှိသည်မကြာသေးမီကထုတ်ဝေများ၊မြေခွေးမှာသို့မဟုတ်ဆာဖာရီ၊ခင်ဗျားသွားကောင်းဖြစ်သွား! ဘယ္လုိအမြန်ဆုံးများအတွက်အော့ဖ်လိုင်းည့္ခဖို့ရရှိနိုင်ပြတင်းပေါက်များအသုံးပြုသူများ၊ဤအမှုရရန်မယ့်ဘယ်တော့မှမကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကဖြန့်ချိ၊ဒါကြောင့်အင်း–ကို-အခြေခံပြီးဂိမ်းအနာဂတ်ကဒီမှာအခမဲ့သင်ျဂိမ်းများသည်ဝမ်းမှအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်၏။
အဖြစ်ထားပြီးဖော်ပြခဲ့တဲ့အတွက်ဆိုက်ခေါင်းစဉ်ကို၊အခမဲ့သင်ျဂိမ်းများသည်လုံးဝအခမဲ့ကစားရန်ဦးတည်ရာ–အပေါင်းကျွန်တော်မည်သည့်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးအနိုင်ရမှပေးဆောင်ကြောင်းအင်္ဂါစေခြင်းငှါအဟောင်းကိုသင်ပယ်။ ဤအမှုကိုပြုသောအတွက်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ရည်ရွယ်ချက်၏အောင်သေချာကြောင်းလူတိုင်းဘယ်သူလာမှာစီမံခန့်ခွဲရန်မှာရောက်လာတဲ့ခရီးကအမှန်တကယ်ကယ်တင်တတ်၏။ ကျွန်တော်တို့သံသယရှိကြောင်းအနာဂတ်အခမဲ့သင်ျသွားဖို့အတော်လေးတစ်လျောက်ပတ်သောတအမှန်ပင်၊ဒါကြောင့်တစ်ဦးအလွန်ကြီးစွာသောစိတ်ကူးရအစောပိုင်းတွင်နိုင်အောင်အဘယ်အရာကိုမြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ျချာသည်အားလုံးနှင့်ပတ်သက်။, သင်မြင်ရပါလိမ့်မယ် daddies နှင့်သမီး၊ညီအစ်ကိုညီအစ်မတွေ၊မိခင်နှင့်သားနှင့်တော်တော်လေးအများကြီးတိုင်းအခြားပေါင်းစပ်နေအောက်မှာ။ ဒါကြောင့်ကျေးဇူးပြု–ယခုမှာထမှတ်ပုံတင်နှင့်ကြည့်အဘယ်ကြောင့်ဤမျှလောက်များစွာသောလူတောင်းဆိုနေကြပါတယ်အခမဲ့သင်ျဂိမ်းအကြီးမြတ်ဆုံးညမ်းဂိမ္းခရီးယနေ့အင်တာနက်ပေါ်တွင်။
စောင့်ရှောက်မှုယူစေခြင်းငှါ၊သင့်ရဲ့လာမယ့်ဂိမ္း fap စည်းအဖြစ်အပူဆုံးတစ်ခုဖြစ်တယ်!